Police, General Administrative Dept, Special Branch of Investigation, Jails and Fire-brigade Depts are transferred from MOHA to NLD State/Division Governments | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ABBA – I haveadream (original)
Head of Ma Ba Tha 969 terrorists, Sitagu »
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့ မီးသတ်ဦးစီးဌာနတို့ကို ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသ ကြီး ၀န်ကြီးချုပ်တွေရဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ထားရှိဖို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေရဲ့လက်မှတ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့တွေထံ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထားတာဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး တာဝန်ခံ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမင်းအောင် က ပြောပါတယ်။
စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမင်းအောင်ကို RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်စိုးလင်း က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
This entry was posted on August 28, 2016 at 1:35 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.